Nisy tavoahangy fitaratra teto amin'ny fireneko hatramin'ny andro taloha. Taloha dia nino ny faribolam-pianarana fa tsy fahita firy ny gira fitaratra tamin'ny andro taloha, noho izany dia kilasy mpitondra fanjakana vitsivitsy ihany no tokony hanana sy hampiasa izany. Na izany aza, ny fanadihadiana natao tato ho ato dia mino fa tsy sarotra ny famokarana vera ...
Fantatrao ve? Betsaka ny tavoahangy fitaratra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-06-28
Toetra mampiavaka sy karazan-tavoahangy fitaratra: tavoahangy fitaratra no fitoeran'entana lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny sakafo, fanafody ary simika. Manana fitoniana simika tsara izy ireo; mora asiana tombo-kase, tsara tery ny rivotra ary mangarahara ary azo jerena ivelany ny atiny; fitehirizana tsara ...
Ny fizotry ny famokarana tavoahangy fitaratra dia ahitana indrindra: ① fanodinana akora mialoha. Torotoro ireo akora betsaka (fasika quartz, lavenona soda, vatosokay, feldspar, sns.) Mba hampamaina ireo akora mando, ary esory ireo akora misy vy mba hiantohana ny kalitaon'ny vera. ② Fanomanana ny ...